Iindaba-Ulandelelwano lwexesha elide lwe-COVID-19
UJennifer Mihas wayedla ngokuphila ubomi obusebenzayo, edlala i-tennis kunye nokuhambahamba e-Seattle.Kodwa ngoMatshi ka-2020, wavavanywa ukuba une-COVID-19 kwaye ebegula ukusukela ngoko.Ngoku wayedinwe ediniwe kukuhamba amakhulu eeyadi, kwaye wayephethwe ngumphefumlo, intloko ebuhlungu, i-arrhythmias kunye nezinye iimpawu ezibuthathaka.
Ezi ayizomeko zodwa.NgokwaMaziko aseMelika oLawulo lweSifo kunye noThintelo, i-10 ukuya kwi-30 yeepesenti yabantu abosulelwe yi-SARS-CoV-2 bafumana iingxaki zempilo ixesha elide.Uninzi lwazo ezinje ngeMihas, ezi mpawu zithe gqolo, ezaziwa njengee-acute sequelae yosulelo lwe-SARS-CoV-2 (PASC) okanye, ngakumbi, ukulandelana kwexesha elide le-COVID-19, inobulali okanye ibenzima ngokwaneleyo ukuba ikhubazeke, echaphazela phantse nayiphi na inkqubo yamalungu emzimbeni.
Abantu abachaphazelekayo bahlala bechaza ukudinwa okugqithisileyo kunye neentlungu zomzimba.Abantu abaninzi baphelelwa sisiva sokungcamla okanye sokujoja, iingqondo zabo ziyacotha kwaye abakwazi kugxila, nto leyo yingxaki eqhelekileyo.Iingcali zixhalabile ukuba ezinye izigulana ezine-sequelae yexesha elide ye-COVID-19 zinokungaze ziphile.
Ngoku, i-sequelae yexesha elide ye-COVID-19 iya isanda kwindawo ebonakalayo.NgoFebruwari, amaZiko eSizwe ezeMpilo abhengeze inyathelo le-1.15 yeebhiliyoni zeedola ukufumanisa oonobangela bokulandelana kwexesha elide le-COVID-19 kunye nokufumana iindlela zokuthintela kunye nokunyanga esi sifo.
Ukusukela ekupheleni kukaJuni, bangaphezulu kwe-180 lezigidi abantu abaye bavavanywa ukuba banayo i-SARS-CoV-2, kwaye amakhulu ezigidi ngaphezulu kusenokwenzeka ukuba bosulelwe yi-SARS-CoV-2, kusenziwa amayeza amatsha ukujongana nenani elikhulu labantu. Izalathisi ezintsha ezinokubakho kwezamayeza.
I-PureTech Health iqhuba ulingo lwekliniki lwesigaba sesi-II sohlobo olukhutshwayo lwe-pirfenidone, i-LYT-100.I-Pirfenidone ivunyiwe kwi-idiopathic pulmonary fibrosis.Iithagethi ze-Lyt-100 ze-pro-inflammatory cytokines, kuquka i-IL-6 kunye ne-TNF-α, kwaye iyanciphisa i-TGF-β ukubonakaliswa ukuvimba ukuchithwa kwe-collagen kunye nokwakheka kwesiva.
I-CytoDyn ivavanya i-CC motactic chemokine receptor 5 (CCR5) i-leronlimab, i-IgG4 ye-monoclonal antibody yomntu, kwisigaba sesi-2 solingo lwabantu abangama-50.I-CCR5 ibandakanyeka kwiinkqubo ezininzi zezifo, kuquka i-HIV, i-multiple sclerosis, kunye nomhlaza we-metastatic.I-Leronlimab iye yavavanywa kwisigaba 2B/3 solingo lwezonyango njengonyango olongezelelweyo lwesifo sokuphefumla kwizigulana ezigula kakhulu ezine-COVID-19.Iziphumo zibonisa ukuba ichiza linenzuzo yokusinda xa kuthelekiswa nonyango oluqhelekileyo olusetyenziswayo, kwaye uphononongo lwangoku lwesigaba sesi-2 luya kuphanda ichiza njengonyango loluhlu olubanzi lweempawu.
I-Ampio Pharmaceuticals inike ingxelo yeziphumo ezihle zesigaba soku-1 se-cyclopeptide i-LMWF5A (i-aspartic alanyl diketopiperazine), enyanga ukudumba okugqithisileyo kwimiphunga, kwaye i-Ampio ithi i-peptide yonyusa yonke into ebangela ukufa kwizigulana ezinoxinzelelo lokuphefumla.Kulingo olutsha lweSigaba soku-1, abaguli abaneempawu zokuphefumla ezithatha iiveki ezine okanye ngaphezulu baya kuzenzela ngokwabo ekhaya nge-nebulizer iintsuku ezintlanu.
I-Synairgen e-United Kingdom isebenzise indlela efanayo yokongeza ixesha elide le-COVID-19 sequelae kwisigaba sesi-3 solingo lwezonyango lwe-SNG001 (i-IFN-β ephefumlelweyo).Iziphumo ezivela kwisigaba se-2 sophando lweziyobisi zibonise ukuba i-SNG001 yayiluncedo ekuphuculeni isigulane, ukubuyisela, kunye nokukhutshwa xa kuthelekiswa ne-placebo ngosuku lwe-28.
Ixesha lokuthumela: 26-08-21